ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကွန်​နက်​တီ​ကတ်​ပြည်နယ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အခြားအမည်များ: The Constitution State
ဆောင်ပုဒ်: Qui transtulit sustinet.(Latin)
မြို့သား ကွန်နက်တီကတ်တာ, Nutmegger
အကြီးဆုံး မက်ထရိုဧရိယာ ဂရိတ်တား ဟတ်ဒ်ဖို့ဒ်
ဧရိယာ အမေရိကန်အဆင့် 48th
- စုစုပေါင်း ၅,၅၄၃ စတုရန်းမိုင်
(၁၄,၃၅၆ စတုရန်း ကီလိုမီတာ)
- အကျယ် 70 miles (113 ကီလိုမီတာ)
- အရှည် 110 miles (177 ကီလိုမီတာ)
- ရေရာခိုင်နှုန်း ၁၂.၉
- လတ္တီကျု 40°58′ N to 42°03′ N
- လောင်ဂျီကျု 71°47′ W to 73°44′ W
လူဦးရေ အမေရိကန်အဆင့် ၂၉ ခုမြောက်
- စုစုပေါင်း ၃,၅၁၈,၂၈၈ (2009 est.)
- သိပ်သည်းမှု ၇၀၂.၉/စတုရန်းမိုင်
- အလယ်အလတ် ဝင်ငွေ $68,595 (တတိယ)
- အမြင့်ဆုံးနေရာ မောင့်ဖရစ်ဇယ်၏ တောင်ဘက်ခြမ်း
Note: The summit of Mount Frissell
is in Massachusetts
2,380 ပေ (726 မီတာ)
- အလယ်အလတ် 500 ပေ (152 မီတာ)
- အနိမ့်ဆုံးနေရာ လောင်းအိုင်းလန်းဆောင်း
0 ပေ (0 မီတာ)
ဝင်ရောက်ခြင်း January 9, 1788 (5th)
အောက်လွှတ်တော် အမတ်များ ဒီမိုကရက် ၅ (list)
အချိန်ဇုန် Eastern: UTC-5/-4
အတိုကောက်များ CT Conn. US-CT
ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ မူလပြည်နယ်ကြီး ၁၃ ခုတွင် အပါအဝင်ဖြစ်၍ အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ထိုပြည်နယ်၏ မြောက်ဘက်တွင် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် တရုတ်ကျွန်း၊ တောင်ဘက်တွင် နယူးယောက်ပြည်နယ်တို့က နယ်နိမိတ် သတ်မှတ် ထားလေသည်။ "Connecticut" ဟူသောအမည်သည် Native American စကားလုံးဖြစ်သည့် quinatucquet မှဆင်းသက်လာပြီး အကြမ်းဖျင်းအဓိပ္ပာယ်မှာ "ရှည်လျားသော ဒီရေမြစ်ဘေး" ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပြည်နယ်၏အလယ်ကိုဖြတ်၍ Connecticut မြစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကွန်နက်တီကတ်နယ်၏ အကျယ်အဝန်းမှာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၅ဝ⁠ဝ၉ သာရှိ၍ ၁၉၅ဝ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေမှာ ၂ဝ⁠ဝ၇၂၈ဝ ယောက်ဖြစ်ရာ အကျယ်အဝန်းနှင့် မမျှအောင် လူဦးရေ ထူထပ်လေသည်။ ထိုနယ်တွင် မြို့ပေါင်းများစွာရှိ၍ မြို့တော်မှာ ကွန်နက်တီကတ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ရှိသော ဟာ့တ်ဖို့မြို့ ဖြစ်၏။ ၁၉၅ဝခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေ ၁၇⁠၇၃၉၇ ယောက် ရှိ သည်။ အခြားမြို့များမှာ ၁၉၅ဝ ခု လူဦးရေ ၁၆၄⁠၄၄၃ ယောက်ရှိသော နယူးဟေးဗင်းမြို့နှင့် ၁၉၅ဝ ခု လူဦးရေ ၁၅၈၇ဝ၉ ယောက် ရှိသည့် ဗရစ်ဂျပို့မြို့တို့ ဖြစ်လေသည်။ ကမ္ဘာ၌ ထင်ရှားကျော်ကြားလှသော ယေးလ်တက္ကသိုလ်မှာ နယူးဟေးဗင်း မြို့တွင် ရှိလေသည်။ ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ်သည် မြေဩဇာ ထက်သန်ကောင်းမွန်ခြင်း မရှိသဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကောင်းစွာမဖြစ်ထွန်းချေ။ သို့ရာတွင် နွားနို့ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းနှင့် သစ်သီးခြံများမှာ နယ်၏စီးပွားရေးကို များစွာ အထောက်အပံ့ပေးလေသည်။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ ထွန်းကားသည့်ပြည်နယ်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ထွက်ကုန်များမှာ စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းသာလျှင် ဖြစ်သည်။ ထိုပြည်နယ်၏ အများဆုံး ထွက်ကုန်များမှာ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ လေယာဉ်ပျံ စသည့် စစ်သုံးပစ္စည်းများ၊ နာရီများနှင့် ဆေးလိပ် ဆေးတံ စသောကုန်စည်များ ဖြစ်ကြလေသည်။ 
ဒတ်ခ်ျကုန်သည်များသည် 1614 တွင်ရောက်ရှိလာပြီး 1633 ခုနှစ်တွင် Connecticut ၏ပထမဆုံးဥရောပအခြေချမှုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒတ်ခ်ျနှင့်အင်္ဂလိပ်အခြေချသူများသည် 1630 အစောပိုင်းတွင် Connecticut တွင်အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးမကြာမီတွင်ထိုမြေသည်ဗြိတိသျှကိုလိုနီဖြစ်လာခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့သမားများသည် ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်မှုကို မကျေမနပ်ဖြစ်လာကြသည်။ 1776 တွင် Connecticut ၏ ကိုယ်စားလှယ်များသည် အခြားသော အမေရိကန် ကိုလိုနီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ကိုလိုနီနယ်မြေများသည် ဗြိတိသျှ အုပ်ချုပ်မှုမှ တရားဝင် လွတ်မြောက်လာသောအခါ ၁၇၈၃ ခုနှစ်အထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည့် အမေရိကန် တော်လှန်ရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ငါးနှစ်အကြာတွင် ကွန်နက်တီကပ်သည် အမေရိကန်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြု၊ သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ပဉ္စမမြောက် အမေရိကန်ပြည်နယ်ဖြစ်လာသည်။
Connecticut Recovery Center
↑ United States Government Printing Office Style Manual (2000), §5.23, http://www.gpoaccess.gov/stylemanual/index.html Archived6August 2011 at the Wayback Machine.
↑ SHG Resources, http://www.shgresources.com/resources/symbols/names/residentnames/ Archived 16 June 2013 at the Wayback Machine.
↑ Population Estimates for All Places: 2000 to 2006: Connecticut SUB-EST2006-04-09.xls. United States Census Bureau. Retrieved 2007-10-16.
↑ State Data from the State and Metropolitan Area Data Book: 2006. United States Census Bureau. Retrieved 2007-10-16.
↑ Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2000 to July 1, 2009။ United States Census Bureau။ 31 July 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-12-23 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Elevations and Distances in the United States။ U.S Geological Survey (29 April 2005)။ 2006-11-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Connecticut State History
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ်&oldid=717532" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။